Vaovao - Inona no mitranga raha voafantina tsy araka ny tokony ho izy ny menaky ny hidin'ny herinaratra hydraulic
Fantatsika rehetra fa ny tariby mitondra herinaratra dia mitovy amin'ny vatan'olombelona, ​​ary ny menaka hydraulic manokana ho an'ny rafitra hydraulic hydraulic unit kosa dia mitovy amin'ny ran'olombelona. Raha misy olana amin'ny rà dia hitondra fepetra maro izany. Androany Huai'an Power Unit dia hilaza aminao ny zava-mitranga raha tsy voafantina tsara ny menaka hydraulic an'ny vatan'ny herinaratra hydraulic?
Tahaka ny ran'olombelona, ​​raha misy rà ny rà, dia tsy hiasa ny vatan'olombelona, ​​ary hiteraka tsy fahombiazana isan-karazany ao amin'ny rafitra fanaraha-maso hydraulic ny vokatra herinaratra azo avy amin'ny herinaratra ny menaka hydraulic hydraulic. Andao jerena aloha ireto tranga manaraka ireto!
Ny viscosity an'ny menaka hydraulic an'ny vatan'ny herinaratra dia tsy ao anatin'ny faritra mety. Ohatra, ny rafitra hydraulic dia takiana mba hampiasaina 20-70 degre Celsius. Na izany aza, raha voafantina amin'izao fotoana izao ny menaka hydraulic VG46 miaraka amin'ny index viscosityzy 100, dia ao amin'ny The visite visite kinematic au 20 degre Celsius dia 1 34,6 cST.
Raha mampiasa rafitra fampidirana fifandraisana mivantana mivantana amin'ny solika-tsolika ny rafi-pandrefesan'ny herinaratra hydraulic, dia tsy azo ampiasaina ny rano sy ny glycol.
Raha ampitahaina amin'ny menaka mineraly, ny menaka hafanana synthetic dia manana hakitroka avo kokoa. Ny menaka marefo misy rano dia tsy vitan'ny hoe manana hakitroka avo kokoa fa manana etona avo kokoa koa, izay hamokatra fanoherana bebe kokoa amin'ny fikorianan'ny solika, mba hialana amin'ny paompy miteraka kavitera sy hovitrovitra, tokony hialanao ny fampiasana menaka toy izany.
Ho an'ny fitaovana kely hydraulic ampiasaina amin'ny fiovan'ny mari-pana lehibe, raha toa ka in-3 ny fiovan'ny viscosity, dia hiova in-3 koa ny famoahana, izay hisy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny rafitra hydraulic kely mikoriana.
Noho izany, ny mpamokatra herinaratra dia mampatsiahy ny olon-drehetra fa rehefa mifantina solika hydraulic dia mitandrema mifidy arakaraka ny tena toetranao miasa mba hisorohana ny karazana fahasimbana amin'ny rafitra hydraulic.